Magaca Nin Kooxda Al-shabaab U Gawracday Inuu Hoggaamiyahoodii Geeriyooday Ku Soo Hagay Diyaaradihii Maraykanka Ee Duqeynta Ku Khaarajiyey | Berberatoday.com
Magaca Nin Kooxda Al-shabaab U Gawracday Inuu Hoggaamiyahoodii Geeriyooday Ku Soo Hagay Diyaaradihii Maraykanka Ee Duqeynta Ku Khaarajiyey
Waxa Kale Oo Ay Toogasho Ku Dileen Saddex Nin Oo Lagu Eedeeyay Basaasnimo
Muqdisho(Berberatoday.com)-Al-shabaab ayaa Afar Ruux oo rag ah oo ay Sheegtay inay ahaayeen basaasiin ku toogtay Doraad gellinkii dambe deegaanka Buulo-fulaay oo ka tirsan gobolka Bay.
Dilkan oo isugu jiray Toogasho iyo Gawrac, ayaa waxa fulisay Maxkamad Al-shabaab leedahay, iyadoo Toogashadooda ay goobjoog ka ahaayeen dadweyne badan oo ka mid ah dadka deegaanka iyo masuuliyiin ka tirsan Al-shabaab.
Garsooraha Maxkamadda Al-shabaab, ayaa sheegay in raggan la Toogtay ay si Gaar ah ula shaqeynayeen Sirdoonka Waddanka Mareykanka, ayna kala shaqeeyeen duqeymo lagu dilay Masuuliyiin iyo Saraakiil ka tirsanaa Al-shabaab, oo uu ka mid ahaa – Hoggaamiyihii hore ee Al-shabaab, Sh. Mukhtaar C/raxmaan Abuu Zubeyr (Axmed Cabdi Godane) oo ahaa iyo Saraakiil kale oo ay ka mid ahaayeen; C/shakuur Tahaliil iyo Yuusuf Dheeg.
Afarta Ruux ee la Toogtay ayaa waxay magacyadoodu kala yihiin; Muxamed Aadan Nuur Xasan oo 26-jir ahaa, kaasoo la Gowracay, Waxaana goobta dilku ka dhacay laga sheegay in uu mas’uul ka ahaa dilkii Hoggaamiyihii Hore ee Al-shabaab, Sheekh Abuu Zubeyr.
Waxaa kale oo ragga la toogtay ka mid ah; Muxyadiin Hiraab Axmed oo 27-jir ahaa, Xuseen Nuunoow Nageey oo 36-jir ahaa iyo Xasan Diiriye Cismaan oo isna 42-jir ahaa. Waxaana ay ka mid noqonayaa dad badan oo ay Al-shabaab horay u dishay.
Ugu dambeyntii, Al-shabaab ayaa horay dhawr jeer sidan oo kale Dilal ugu fulisay dad ay ku eedeeyeen inay ahaayeen Jawaasiis la shaqeeya waddamada reer galbeedka, Waddanka Itoobiya iyo Sirdoonka Dowladda Federaalka Soomaaliya.